AmaNgqina KaYehova—Iziganeko Zethu Ezikhethekileyo | JW.ORG/XH
Kumawaka amaNgqina kaYehova athetha isiTagalog aseYurophu, le ibiyindibano yokuqala yeentsuku ezintathu ngolwimi lwawo.
IQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova lanceda abathunywa bevangeli nabanye abakwinkonzo ekhethekileyo yexesha elizeleyo ukuba baye kunandipha iindibano emakhayeni abo baze bachithe ixesha neentsapho zabo.
Iindibano Zezizwe Ngezizwe Zika-2014—AmaNgqina KaYehova Afuna Kuqala UBukumkani BukaThixo
Bukela njengoko abazalwana abasehlabathini lonke besiza kufunda ngoBukumkani bukaThixo.
Itheko labafundi abaphumeleleyo belingoMatshi 14, 2015. Bonke ababekho bakhuthazwa ukuba baqhubeke befunda ngoYehova uThixo baze balinganise umzekelo omhle kaYesu Kristu.
Ucwangciso lwetheko lwaluquka iingoma zoBukumkani ezine ezintsha ibe lwabethelela oko kufanele kwenziwe ngabo baphumeleleyo ngamalungelo noqeqesho abalufumene eGiliyadi.
Abantu abaninzi abasuka kwiindawo neemvelaphi ezahlukahlukeneyo baseluxolweni bonke.
Iziphathi-mandla zancoma zaza zamkela iindwendwe ezisuka kumazwe ayi-28 ezazize kwindibano ngoJulayi nangoAgasti 2014.
Le ntlanganiso yonyaka iyimbali yeyokukhumbula iminyaka eyi-100 yokumiselwa koBukumkani bukaMesiya.
Bonke abebezile bakhuthazwa ukuba bahlale bethobekile baze baqhubeke befaka iingcinga zikaYehova ezintliziyweni zabo.
Iindwendwe ezininzi zihlanganisene kwintlanganiso yonyaka ye-130 yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Bukela iimbalasane zalo mbhiyozo weminyaka eyi-100 yokulawula koBukumkani.
Ukususela ngo-1943 iSikolo saseGiliyadi besiqeqesha abo bakulungeleyo ukufikelela kulwazi oluchanileyo ngoThixo. Bukela amagqabantshintshi etheko labaphumeleleyo.
Amalungu eQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova atyelela eRashiya naseUkraine ukuze omeleze amaNgqina achatshazelwe zizidubedube zezopolitiko.
Bukela iimbalasane zolu cwangciso lumnandi noluyimbali, obelusasazwe kwiindawo eziyi-1 830 ezisehlabathini lonke.
Abahlohli nezinye izithethi ziye zakhuthaza abafundi ukuba babe nesimo sengqondo awayenaso uYesu. Abo babezile baye bonwabela udliwano-ndlebe nemiboniso yamava entsimi.
Ucwangciso lweli theko luquka iintetho ezakhayo, udliwano-ndlebe nabafundi abaphumeleleyo nemiboniso yamava asentsimini.
Yintoni eyenza abantu abangaphezu kwe-1.4 miliyoni bamazwe ayi-31 beze kwesi siganeko sikhetheke kangaka?
Abantu abangaphezu kwe-1.4 miliyoni kumazwe ayi-31 baye bonwabela esi sihlandlo simnandi, bekukhululwa kuso iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ehlaziyiweyo yesiNgesi.
Kweli theko bekukho abantu abangaphezu kwe-10 000 abaye basivuyela esi sihlandlo besingoSeptemba 14, 2013. Wonwabele amagqabantshintshi eli theko.
AmaNgqina kaYehova eDublin, eIreland, amkela iindwendwe ezazize kwiNdibano Ekhethekileyo Ka-2012 enomxholo othi, ‘Londoloza Intliziyo Yakho!’ Funda ngoko abanye abantu abakutshoyo ngesi siganeko.
Kwilizwe apho abantu baye baba ziintlaba zahlukane ngenxa yeengxwangxwaba zentlalo nezonqulo, kuye kwabonakala umanyano phakathi kweentlanga zalo ezahlukahlukeneyo ebudeni behlobo lango-2012 eTel Aviv.
Esi sikolo seBhayibhile siqeqesha amaNgqina kaYehova ukuba abe luncedo ngakumbi kwizabelo zabo.
Kutshanje amaNgqina kaYehova ebeneendibano ezikhethekileyo eBrazil, eCosta Rica, eHong Kong, eIreland, eIsrael, eNew Zealand naseSweden.
Esi sikolo sikhethekileyo siye saqeqesha abashumayeli kule minyaka iyi-70 idlulileyo. Bukela amagqabantshintshi eli theko.
Bukela ifilimu yeeyure ezimbini ethetha ngeeNdibano zezizwe ngezizwe zango-1963 ezazinomxholo othi ‘Iindaba Ezilungileyo Ezingunaphakade’.
Abafundi abaphumelele kwiSikolo seBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi ngoMatshi 9, 2013. Kweli theko bekubaliswa ngezinto eziye zaphunyezwa sesi sikolo ukususela oko saqalayo kwiminyaka eyi-70 eyadlulayo.
Kwiminyaka eyi-50 eyadlulayo, amaNgqina kaYehova ayi-583 athabatha uhambo lweeveki ezilishumi olwaluza kubajikelezisa kwihlabathi lonke.